विदेशीबाट राजनीतक र आर्थिक सहयोग लिने क्रम शुरु गर्ने हो भने नेपालको हालत के होला ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
विदेशीबाट राजनीतक र आर्थिक सहयोग लिने क्रम शुरु गर्ने हो भने नेपालको हालत के होला ?
प्रकाशित मिति : २०७७, ५ असार शुक्रबार ०९:४२
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच पार्टीबीच हुन गइरहेको गोष्ठीप्रति आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले ट्वीट गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘अब यसैगरि अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि आफू अनुकुलका विदेशी दलहरुबाट प्रशिक्षण तथा राजनीतक र आर्थिक सहयोग लिने क्रम शुरु गर्ने हो भने नेपालको हालत के होला ?के नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बनाउन खोजिएको हो?’
दुई देशका कम्युनिष्ट पार्टीबीच शुक्रबार बेइजिङबाट कार्यशाला सञ्चालन गर्न लागिएको छ । कार्यशालामा जिम्मेवार पार्टी सदस्यहरूले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नेछन् । भिडियो अन्तरक्रियामा नेपालका तर्फबाट नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायत १ सय भन्दा बढी उच्चस्तरीय नेताहरू सहभागी हुने बताइएको छ ।
नेताहरूलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख सोङ थाओलगायत नेताहरूले प्रशिक्षित गर्ने जनाइएको छ । यसअघि गत वर्ष असोजमा दुवै देशका पार्टीको संयुक्त पहलमा काठमाडौंमा दुई दिने विचार गोष्ठी गरिएको थियो ।